Akụkọ - atụmatụ njiri mara mma, nke enwere ike ịhazi ngwa ngwa - Konaway Ọhụrụ
Atụmatụ Senling nwere obi ike, nke enwere ike ịhazi ngwa ngwa-Konaway Ọhụrụ
Disemba 18, 2020-Taizhou obodo, Zhejiang Province
Zhejiang Senling Motorcycle Co., Ltd. nwere ọgbakọ mkparịta ụka na-anọghị n'ịntanetị maka ndị na-ere ahịa n'ofe mba ahụ wee kwupụta ụdị ihe ngosi ọhụrụ-Konaway. Ịrụ ọrụ ahụ ọhụrụ na -eme ka nhazi dị mfe, ebe ị na -ewere usoro injin ọhụrụ dị ụtọ, maka arụmọrụ agbakwunyere n'ọtụtụ ọnọdụ ịnya ụgbọ ala. Etufughị ​​n'ime imewe ahụ bụ ihe ịtụnanya gas nke Konaway, ọnụ ahịa ọrụ na mmezi ya, nlebara anya na nkọwapụta na ntụkwasị obi Senling dị ịtụnanya.
Konaway na-ele anya na-eme ihe ike na ọdịdị enweghị isi. Igwe ụdị Suzuki nke na-arụ ọrụ nke ọma ugbu a nwere arụmọrụ ka mma karịa GY125, ebe oche dị larịị na-anabata ịdị elu nke onye na-agba ya. Maka inwe ọ funụ dị n'etiti nkwụsị, yana ngosipụta LCD zuru oke na-eme ka ọ dị mfe ibubata ya. Ihe nlereanya a bụ ihe ọchị, yana site na nhazi ọhụrụ a dị mfe yana nkasi obi na-abawanye, nke kwesịrị inyere aka kpalite uto nke obodo ahụ na -anụ ọkụ n'obi n'ime ụlọ na mba ofesi.
Konaway bụ ihe akaebe na ndị skuuta nwere ike karịa ndị njem obodo nwere ikike. N'ịnakwere echiche '' City Adventure '' nke Senling, nke butere ndị skuuta nwere ike ma nwee ike, ụdị a pere mpe na-ejikọ atụmatụ dị mma dị ka teknụzụ CVT na nchekwa oche n'okpuru oche nwere ụdị aghụghọ nke na-akpali ihe egwuregwu dị egwu. Maka afọ atụ 2021, enwerekwa ọtụtụ nhọrọ agba ọhụrụ.
Konaway-sitere na kọfị kọfị Hawaii dị elu "KONA"
Ga -emepụta ọdịnihu ọhụrụ maka skuuta!
Oge ezipụ: Jun-20-2021